Baaskiilada Firmstrong - BikesReviewed.com - aru-ua - dieselboss
Baaskiilada Firmstrong – BikesReviewed.com – aru-ua
Waa kuma Firmstrong?
Firmstrong waa shirkad baaskiil oo Mareykan ah oo fadhigeedu yahay Hermosa Beach, California. Shirkadda waxaa la aasaasay toban sano ka dib markii la ogaaday baahida loo qabo baaskiil nadiif ah, fudud, iyo si sahlan loo isticmaali karo oo qiimo jaban ah. Shirkaddu waxay doonaysaa inay fududayso baaskiilka naqshadaheeda.
Hadafka Firmstrong waa inuu horumariyo baaskiilada ka badan habka gaadiidka. Waxaad rabtaa inaad naqshadayso baaskiilada isku dhafan qaabka iyo shaqeynta. Shirkaddu waxay ku faantaa inay iibiso baaskiillo tayo sare leh oo la awoodi karo.
Shirkadu ma isticmaasho wax qaybiyeyaasha ama dukaamada tafaariiqda ee waaweyn. Taa beddelkeeda, waxay si toos ah ula xiriiraan macaamiisha. Baaskiilada Firmstrong waxaa la keenaa 85% oo la soo ururiyey.
Shirkaddu waxay bixisaa dammaanad nololeed oo ka dhan ah cilladaha wax soo saarka ee agabka iyo shaqada dhammaan qaybaha. Waxay bixiyaan…
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Playboi Carti Altura, Peso, Años, Novia, Niños, Hechos, Biografía
Entrada siguienteSiguiente Requisitos del sistema Arena – Requirementsfor1.com